सामान्य रुघाखोकी लागेको हो कि कोरोना, कसरी छुट्याउने? लिनुहोस विज्ञको सुझाव:: Naya Nepal
सामान्य रुघाखोकी लागेको हो कि कोरोना, कसरी छुट्याउने? लिनुहोस विज्ञको सुझाव
काठमाडौं। अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो। हरेक वर्ष यो बेला रुघाखोकी लाग्नेगरेकै थियो। तर यसपटक कोरोना संक्रमण फैलिएकाले सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर त्रसित हुनेको संख्या धेरै छ।
यस विषयमा जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेको भनाइ यस्तो छ :
-स्वाद वा र गन्ध थाहा नहुने
-अक्सिजन र आईसीयूको उपचार आवश्यक पर्न सक्ने
रुघा खोकी लाग्दैमा कोरोना भनेर नडराउनुस्, यसरी घरमै अपनाउनुहोस् सरल विधि निको हुन्छ
काठमाडौं। अहिले मौसम परिवर्तनको समय रहेको कारण धेरै मानिसहरु रुघा खोकी, टन्सील, ज्वरोबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । यस्तो समयमा स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा निकै दुख पाइन्छ भने अन्य समस्याहरु पनि थप हुँदै जान बिधी। घाँटी खसखस हुने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने, खोकी लाग्ने, रुघाबाट ग्र स्त हुने, टाउको दुख्ने र नाक बाट पानी वा सिंगान बगिरहने लगायतका समस्याहरु यस्तो बेलामा देखा पर्नु सामान्य नै हो।
यी समस्याहरु देख्ने बित्तिकै उपचार गरेन भने सि’किस्त बिमारी भएर बेडमै थला परेर बस्नु पर्ने हुन्छ । बढ्दो चिसोको कारण हुने यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन समयमै औ’षधी उपचार गर्यौं भने यी समस्या त्यति जटिल या भ या न क भने होइन । सुरुमै रुघाखोकीको लक्षण देख्ने बित्तिकै यसको हेरचाह र घरायसी औ’षधिमा लाग्नु उत्तम हुन्छ । यसका लागि हामी केही घरायसी उपाय यहाँ प्रस्तुत गर्दै छौं।
तुलसीको पात: तुलसीको पात कयौँ रोगहरुको लागि एक अचुक घरेलु औ’षधी हो। यसले मुटु रोग वा पेट सम्बन्धी बिमारीहरुलाई निको पार्नुका साथै यो रुघाखोकी, ज्वरोको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। यसको लागि एक गिलास पानीमा ५र६ ओटा तुलसीको पात राखेर मज्जाले उमाल्नुहोस्। उमालीसकेपछी मन तातो वा चिसो भएपछी यो पानी पिउनुहोस् । दिनभर २र३ पटक गरेर थोरै थोरै पिउनुहोस् । यसले रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, नाकबाट सिंगान बग्ने जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा दिलाउन मद्धत गर्छ।
मेथिदाना : मेथी दाना पनि अनेक गुण भएका एक घरेलु औ’षधी हो। यसले रुघा, खोकी, चिसो, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरुलाई छिट्टै निको पार्छ। मेथी दानाको सेवनले शरीरमा चाँडो गर्मी हन्छ, जसको कारण यस्ता समस्याहरुबाट तुरुन्तै राहत मिल्छ । यसको लागि एक गिलास पानीमा एक सानो चम्चा मेथी दाना राखेर ५(१० मिनेटका लागि उमाल्ने। उमालीसकेपछी मन तातो बनाएर दिनमा २ पटक यो मेथी पानी सेवन गर्नुहोस्।
अंगुरको जुस : सुख्खा खोकी, घाँटी दुख्ने या रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउन बिहान बेलुका अंगुरको जुस पिउनुहोस्। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम लाभदायी हुनुका साथै रुघाखोकीलाई पनि तुरुन्तै निर्मुल पार्छ।
बेसार : आयुर्वेदमा बेसारलाई शरीरको शुद्धिकरणको लागि पुर्खौं देखि प्रयोग गरिंदै आएको एक अचुक औ’षधी हो। बेसारले जस्तो सुकै ज्वरो वा जिउ दुख्ने रोगलाई निको पार्छ। रुघाखोकीबाट तुरुन्तै राहत पाउन बिहान बेलुका एक गिलास तातो पानीमा एक या आधा चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्। अथवा एक गिलास तातो दुधमा एक चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्।
काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंकमा राखिएको पैसा बैंक खाताबाटै ग्राहकलाई थाहै नदिएर सुटुक्क बैंक आफैले निकालेको छ। बैंक खाताबाट रकम हराएपछि खोजि गर्दै जाँदा रकम बैंक आफैले निकालेको भेटिएको हो । रकम झिकिएको सूचना पाएपछि खातावाल सो को खोजि गर्दै बैंक पुगेका हुन् । आफैले पैसा झिकेपछि पैसा किन झिकियो भन्ने कारण माग गर्दा बैंकले कारण दिन सकेको छैन।
बैंकको खातामा राखिएको रकम एकाएक गायब भएपछि खोजि गर्दै जाँदा बैंक आफैले रकम झिकेको पत्ता लागेको पीडित ग्राहकले बताएका छन् । एनआईसी एशिया बैंकको लहान सिराहामा एक संस्थाको नाममा रहेको करिव ३ लाख रुपैयाँ एनआईसी एशिया बैंकले खातावालालाई थाहै नदिई रकम निकालेको हो।
बैंकबाट स्टेटमेन्ट ल्याउँदा रकम हराएको पाइएपछि रकमको खोजि भएको थियो । रकम खोज्ने क्रममा उक्त रकम बैंक आफैले निकालेको भेटिएको खतावालले जनाएका छन् । उक्त स्टेटमेन्ट अनुसार ग्राहकको खाताबाट बैंकले दुइपटक गरी रकम निकालेको छ । खातावालाले रकम खोजि गर्ने क्रममा खाताबाट रकम गायब भएपछि बैंकसँग स्टेटमेन्ट माग गर्दा पटकपटक गरी रकम निकालेको स्टेटमेन्टमा देखिएको छ।